Xildhibaankii su'aasha weydiiyay Madaxweyne Deni oo la weydiistay "in xasaanadda laga qaado" si "loo dacweeyo" - BBC News Somali
Xildhibaankii su'aasha weydiiyay Madaxweyne Deni oo la weydiistay "in xasaanadda laga qaado" si "loo dacweeyo"
30 Oktoobar 2019
Maxamad Xareed oo ah ku xigeenka Xeer-Ilaaliyaha Puntland ayaa BBC-da u sheegay in Baarlamaanka ay u direen warqad ay ku codsanayaan in xasaanadda laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad.
"Qoraalkan waa codsi xasaanad ka qaadis iyo ogolaansho ku soo oogid dacwad ciqaab ah oo lagu qaado xildhibaan ka tirsan golaha Wakiillada Puntland", ayuu yiri Maxamed Xareed. Wuxuu inta ku daray in xildhibaankaas uu "ku xadgudbay qawaaniinta iyo dastuurkadalka u degsan dalka."
Xildhibaanka wuxuu su'aal weydiiyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo Sabtidii furay kullanka 45-aad ee baarlamaanka.
"Mudane Madaxweyne, waxaad xilka haysay sagaal bilood, wejiga dhabta ah ee xukuumadda aad hoggaamisana waxaa la moodaa in uu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay ee muddo xileedkaaga," ayuu su'aashiisa ku billaabay Xildhibaan Cawil oo madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ka dalbaday "in ay is casilaan".
Balse Xeer-Ilaalinta Puntland waxay sheegeysaa in xildhibanka uu "jebiyay" qodobo ku xusan dastuurka Puntland oo ay ka mid yihiin kuwa ciqaabta.
"Waa hadallo qadaf ah oo uu u ekeysiiyay su'aalo oo uu u soo jeediyay golaha xukuumadda", ayuu yiri Maxamed Xareed.
Xeer-Ilaaliye ku xigeenka wuxuu ku celceliyay "in iyagu aysan xasaanadda ka qaadi karin" xildhibanka balse baarlamaanka ay u qoreen warqad ay arrintaas ku dalbanayaan.
"Haddii baarlamaanku xasaanadda ka qaadaanna waan eedeyneynaa, waxaanna horgeyneynaa maxkamadda, wuxuuna la kulmayaa ciqaabta uu ka mudan yahay qodobbada uu u gefay", ayuu hadalka kusii daray.
"Xurriyatul qowlka jaantaa rogan ma aha. Waddanku nidhaam buu leeyahay. Shuruuc ba taalla, dastuur baa yaalla cidkastoo xil kasta haysa, sharciga ayaa ka sarreeya", ayuu ku adeystay Xareed.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay baarlamaanka oo warqadda codsiga loo diray. Xildhiban cawil Xasan Daad-na weli wax war ah kama uusan soo saarin warqadda lagu dalbaday in "xasaanadda laga qaado".
Su'aashii Daad iyo Jawaabtii Deni
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka, Cawil Daad oo fursadda ka faa'ideystay ayaa madaxweynaha weydiiyay su'aal u muuqatay in uu aad uga "carooday" sida ay BBC Somali u sheegeen qaar ka mid ah xildhibaannada iyo dadkii kale ee kulanka lagu casuumay.
"Mudane Madaxweyne, waxaad xilka haysay sagaal bilood, wejiga dhabta ah ee xukuumadda aad hoggaamisana waxaa la moodaa in uu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay ee muddo xileedkaaga," ayuu su'aashiisa ku billaabay Xildhibaan Cawil.
"Mudane Madaxweyne, maadaamaa khilaafka adiga iyo madaxweyne ku xigeenkaagu uu soo noqdnoqday, oo uu yahay mushaakil dadka niyad xumi ku sii abuuray, soo kulama haboona inaad adiga iyo ku xigeenkaagu xafiiska baneysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna?"
Balse inta uusan Madaxweyne Deni ka jawaabin su'aashaas, waxaa hadlay Gudoomiyaha Baarlamaanka oo yiri: "Idinkoo sharfan, madaxweynuhu waa madaxweynihiinii, su'aalahana ha ahaadeen su'aalo hufan oo sharfan oo aan weerar ku ahayn shaqsi, dalka iyo dadkana maslaxaddiisa ah. Sidaas ayaan codsanayaa".
Xigashada Sawirka, PUNTLAND STATE HOUSE
Intaa ka dib, Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka jawaabay su'aasha wuxuuna yiri: "Xaqiiqda marka loo hadlo, dadka dalka xogtiisa haya ma ahan Baarlamaanka oo keli ah. Dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer Puntland oo dhan".
"Markaan xilka qabannay meesha uu dalka joogay waad ogtihiin. Maanta waxa aan sheegeyno ma ahan warqado hadallo ku qoran; Waa wax xaqiiq dhab ah oo jira", ayuu yiri Madaxweynaha.
"Amniga, meelihii ugu darnaa waxaa ka mid ah Boosaaso, waxaan filayaa in dad badan oo mas'uuliyiin ah ay Boosaaso ka yimaaddeen. Waxaan ka rabaa Cawil inuu caddeyn dhab ah keeno meesha amni darro darteed looga qanuuday", ayuu yiri Deni.
Wuxuu intaa ku daray: "Gobolka Sanaag oo dhan, marka laga reebo magaalada Yubbe iyo inyar oo la mid ah, gacanta Puntland ayay soo gashay muddadii aan xilka haynay". Kadib waxaa u sacbiyay tageerayaashiisii fadhiyaey kulanka.
Isagoo sii xoojinayay hadalkiisa wuxuu yiri: "Waxaa maanta wasaaradihii dowladda oo dhan ay joogaan magaalada Buuhoodle oo markaan xilka nimid uu khalkhal amni ka jiray".
Wuxuuna sidoo kale ka hadlay tababarka ciidamada, baahinta mamulkiisa, sumcadda iyo horumarka dhaqaalaha iyo mushaar bixinta. Ka dib wuxuu dhalleeceeyay Xildhibaan Cawil iyo maamulkii hore wuxuu yiri: "Waxay ku guul darreysteen in ay bixiyaan mushaaraadka".
Madaxweyne Deni oo baarlamaanka ka baxay isagoo "xanaaqsan"
Deni oo Dowladda Federaalka uga digay muddo kororsi
Wajiyada hoggaamiyeyaasha kala aragtida duwan ee ka qeyb galaya Caleema saarka madaxweynaha Puntland
Waxay markaa ka dib u muuqatay in buuqa mucaaradkiisa iyo shacabka taageerayaashiisa ay is dhexgaleen. Waxaana hadalka soo dhexgalay Gudoomiyaha Baarlamaanka oo dalbaday in xasiloonida la ilaaliyo.
"Gudoomiye waxyar", ayuu yiri Deni oo doonayay in gudoomiyaha uu aamuso si uu hadalkiisa u sii wato.
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni (midig) iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash (bidix) waxaa la sheegay inuu khilaaf u dhexeeyo
Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo Wakiillada Aqalka Sare, sida Cabdiraxmaan Faroole, madaxweynihii hore ee Puntland.
Cawil Daad oo dib u soo laba kacleeyay wuxuu yiri "Gudoomiye su'aasheyda haka jawaabo madaxweynaha; meelo kale ayuu marayaa". Laakiin waxaa loogu jawaabay in uusan "hadal dambe u furneyn".
Laakiin madaxweyne Deni intaa kuma gaabsan ee wuxuu yiri "Waad aamuseysaa, nidaamka dowladnimda haddadan raacinna, adiga ayaa mas'uuliyaddeeda qaadaya".
"Ma ahi nin lagu cabsiin karo in an waajibkeyga garan waayay, mana ahi nin loo sheegi karo danta iyo dawga dowladdani ay dooratay", ayuu hadalka ku sii daray.
Ka dib madaxweyne Deni oo hadalkiisa soo afjaray ayaa fadhiga Baarlmanka isaga baxay. Waxaana la filayay in su'alo dheeraad ah ay weydiiyaan xildhibannada, balse taasi ma aysan dhicin.
Deni oo loo arko in uusan xiriir fiican la lahayn Dowladda Federeelka ee Soomaaliya, wuxuu gudaha Puntland ka wajahayaa mucaaradad kaga imaneysa qaar ka mid ah xildhibaannada iyo siyaasiyiin kale.
Sidoo kale, qaar ka mid ah go'annadii uu horey u gaaray, waxaa ka hor yimid madaxweyne ku xigeenkiisa, Axmed Karaash, inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn, in la xalliyay khilaafkaas iyo in kale.
26 Jannaayo 2019
Hadalkii madaxweyne Deni ma rajo gelin doonaa iskaashiga maamul goboleedyada?
10 Jannaayo 2019
17 Sebtembar 2019
Maxaa ka jira in Uhuru iyo Farmaajo ay ka wadahadlayaan muranka badda?
Gantaalka Shiinaha haddii uu ku dhici lahaa meel ay dad deggan yihiin maxaa dhici lahaa?
9 Maajo 2021
Daawo muuqaal xaaladda ka taagan Masjidka barakeysan ee Al-aqsaa
Xagee buu ku dhacay gantaalkii ka fakaday Shiinaha ee aadka loo hadal hayay?
Gantaalkii Shiinaha ee fakaday oo saacadaha soo socda dhulka soo gaaraya